स्कूल नीतिहरु - क्यानाडा मा BLI भाषा स्कूल
तपाइँ सबै जान्नु आवश्यक छ
BLI मा, हामी अंग्रेजी-वा-फ्रेन्च-मात्र नीति लागू गर्दछौं। यो नीति क्यानाडा मा आफ्नो अध्ययनको समयमा तपाइँको अंग्रेजी वा फ्रान्सेली भाषा अभ्यास अधिकतम गर्न मद्दतको लागि स्थापित गरिएको छ।
तपाइँलाई आफ्नो भाषा प्रवीणता स्तर सुधार गर्न मद्दतको लागि, तपाइँ BLI मा हुँदा तपाइँ कुनै समय अध्ययन गरिरहनु भएको भाषामा मात्र कुराकानी गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
यदि तपाईंले नीति तोड्नु भयो भने, तपाईंले एक दण्ड पाउनुहुनेछ:
पहिलो अपराध तपाईंले चेतावनी कार्ड प्राप्त गर्नुहुनेछ
दोस्रो अपराध तपाइँलाई एक दिनको लागि BLI बाट निलम्बित गरिनेछ र अनुपस्थितको रूपमा रेकर्ड गरिनेछ
तेस्रो अपराध तपाइँलाई तीन दिनको लागि BLI बाट निलम्बित गरिनेछ र अनुपस्थितको रूपमा रेकर्ड गरिनेछ। तपाइँले कार्यक्रम संयोजकसँग भेट्नु पर्छ
चौथा अपराध तपाइँलाई BLI बाट पाँच दिनको लागि निलम्बित गरिनेछ र अनुपस्थितको रूपमा रेकर्ड गरिनेछ। तपाइँले कार्यक्रम संयोजकसँग भेट्नु पर्छ
पाँचौं अपराध तपाइँलाई एक सत्र वा बराबरको लागि स्कूलबाट निलम्बन गरिनेछ
आफैंलाई तपाईको भाषा प्रवीणता स्तर सुधार गर्न वास्तवमै मद्दत गर्न, तपाईले BLI मा हुँदा प्रत्येक समयमा अध्ययन गरिरहनु भएको भाषामा मात्र कुराकानी गर्न सकिन्छ।
ढिलो र अनुपस्थिति
BLI ले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको कक्षामा समय समयमा हुनको अपेक्षा गर्दछ। तपाइँको शैक्षिक प्रगतिको लागि उपस्थिति र समयनिष्ठता धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामी तपाईको नियमित कक्षामा उपस्थित हुन र कक्षाको अवरोध हुनबाट बच्न समयनिष्ठ हुनको लागि र तपाईले कुनै महत्त्वपूर्ण सूचनालाई नबिर्सिएको सुनिश्चित गर्न अपेक्षा गर्दछौं।
· यदि तपाईं ढिलो पुग्नु भयो भने, आफ्नो शिक्षक र सहपाठीलाई आदर देखाउनुहोस् कक्षामा प्रवेश गरेर र चुपचाप आफ्नो सीट लिनुहोस्
· नोट गर्नुहोस् कि यदि तपाईं "ABSENT TIME" (तपाईंको कक्षा सुरु हुने १ class मिनेट पहिले) पुग्नुभयो भने तपाईंको शिक्षकले तपाईंलाई कक्षाकोठामा पहुँच अस्वीकार गर्न सक्दछ
· यदि त्यहाँ कुनै खास परिस्थिति छ जुन तपाईंलाई नियमित आधारमा समयमै पुग्न असम्भव बनाउँदछ भने, यस बारे शैक्षिक संयोजकसँग कुरा गर्नुहोस्।
· BLI शिक्षकहरू तपाइँको कक्षाको उपस्थिति को एक दैनिक रेकर्ड राख्छन्
· यदि तपाईं सत्रमा २०% भन्दा बढी अनुपस्थित हुनुहुन्छ भने, तपाईंले लिनुभएको पाठ्यक्रमको लागि तपाईं क्रेडिटहरू प्राप्त गर्नुहुने छैन
· यदि तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ वा तपाईंको अनुपस्थितिको बारेमा तपाईंलाई सूचित गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यसलाई पूरा गर्नुहोस् अनुपस्थिति सूचना फाराम।
· यदि तपाईं तीन पटक एक कक्षामा ढिला हुनुहुन्छ भने, यो एक अनुपस्थिति बराबर हुन्छ। यदि तपाईं %०% भन्दा कम उपस्थित हुनुभयो भने, तपाईंले तिनीहरूको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुने छैन।
· तपाईंसँग minutes मिनेट सहनशीलता छ
· यदि तपाईं class र १ minutes मिनेट बीचमा आइपुग्नुहुन्छ भने तपाईंको कक्षा सुरु हुने समय, तपाईंलाई ढिलाइ दिइनेछ
· यदि तपाइँ तपाइँको कक्षाको सुरू समय भन्दा १ minutes मिनेट पहिले आइपुग्नु भयो भने, तपाइँ अनुपस्थित हुनुहुनेछ
· यदि तपाईंलाई कक्षामा ढिलो चिन्ह लगाइयो भने तीन पटक, यो एक अनुपस्थिति बराबर हुनेछ
· यदि तपाईं class०% भन्दा कम कक्षामा भाग लिनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुने छैन
२ weeks हप्ता र अधिकको लागि आउने विद्यार्थीहरूलाई अनुपस्थितिको बिदाको लागि अनुमति दिइन्छ। यो अनुपस्थितिको बिदा चार हप्ता भन्दा लामो हुन सक्दैन। यदि तपाईंलाई अनुपस्थितिको अनुमति दिइयो भने, तपाईंको कक्षा स्थगित हुनेछ।
यदि अनुपस्थितिको बिदाको लागि अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले १२ हप्ताको अध्ययन पूरा गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईं विदेश भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग मान्य भिसा हुनै पर्छ।
अनुपस्थिति अनुरोधको बिदा शैक्षिक विभागको अनुमोदनको विषय हो। यदि तपाइँको अनुरोध अनुमोदित छैन भने BLI तपाइँले बनाउनुभएको यात्रा योजनाहरूको लागि जिम्मेवार छैन।
तपाईं केवल एक अनुपस्थितिको बिदा अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
अनुपस्थितिको बिदा अनुरोध गर्न कृपया हाम्रो पूरा गर्नुहोस् छुट्टी अनुरोध फाराम.
यद्यपि यो दुर्लभ स्थिति हो, यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंलाई राखिएको कक्षाले तपाईंलाई तपाईंको भाषा सीप सुधार गर्न मद्दत गरिरहेको छैन वा यो धेरै गाह्रो छ भने, तपाईं कक्षा परिवर्तन अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्न, तपाईले BLI पूरा गर्नु पर्छ वर्ग अनुरोध परिवर्तन फारम, एकचोटि हामीले प्राप्त गरेको एकेडेमिक समन्वयकले तपाईंलाई परिस्थिति राम्रोसँग बुझ्ने प्रयासको लागि भेट गर्न भेट गर्न सम्पर्क गर्नेछ। कक्षाको परिवर्तन तपाईको कक्षाको पहिलो हप्ताको बखत मात्र हुन सक्छ। उसले तपाईका शिक्षकहरूसँग छलफल गर्नेछ र तपाईलाई अन्तिम निर्णय २ 24 घण्टा भित्र दिनेछ।
तपाईं अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईंको प्रोग्राम डाउनग्रेड गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाइँ एक कला लिन वा तपाइँले लिन चाहानु भएको पाठ्यक्रममा ठाउँ उपलब्ध छ कि छैन भनेर शैक्षिक संयोजक संग वैकल्पिक वर्ग कुरा गर्न रुचि राख्नु हुन्छ। शैक्षिक संयोजकले तपाईंलाई कुन चरणहरू अनुसरण गर्ने बताउनेछ।
गैर विस्थापन नीति
१) विचार: कार्यक्रमहरूको डेलिभरी र अन्य राम्रो र बहुमूल्य विचारको लागि विचारमा, यसका प्राप्ति र पर्याप्तता सबै वर्तमान विद्यार्थीहरूले स्वीकार गर्दछन्;
2) यस सम्झौताको उद्देश्यका लागि "विस्थापन" ले साधारणतया संस्थाको बारेमा नकारात्मक टिप्पणीलाई जनाउँछ जुन द्वेषपूर्ण वा लापरवाह गरिएको छ (यस नीति अन्तर्गत समावेश सबै व्यक्तिहरू सहित) वा त्यस्तो टिप्पणीको सत्यता प्रमाणित गर्न व्यावहारिक कदमहरू चाल्नु अघि। तिनीहरूलाई बनाएको।
)) जो बाध्य छ: क्यानेडाली कानूनको अधीनमा मात्र कुनै पनि प्रान्तमा लागू हुन सक्छ (निजी कैरियर स्कूलहरू वा संस्थानहरू संचालन गर्ने कानूनी कानून लगायत सीमितता बाहेक तथा क्यानाडाली अधिकार तथा स्वतन्त्रताको चार्टर यदि / जहाँ लागू भएमा), सबै विद्यार्थीहरू यो गैर द्वारा बाध्य हुनेछन् -Disparagement नीति। नीति पालन गर्न नामांकनको एक सर्त हो।
)) नीतिको उद्देश्य: संस्था उत्कृष्टताको लागि प्रतिष्ठा छ। संस्था क्युबेकको प्रान्तमा बहु स्थानहरू सञ्चालन गर्ने एक निजी संस्था हो, र शिक्षणको उच्च स्तर कायम गर्न र BLI, बोचेरो लि L्गुआ अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाण-पत्रको मूल्य स्थिर रहेको सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ।
)) सोशल मिडिया: सामाजिक मिडिया (फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इत्यादि) को लोकप्रियताका साथ विद्यार्थीहरू, र संस्थानका पूर्व छात्रहरू र यसका सबै सम्बद्ध संगठनहरू, यस्तो कुराकानी गर्न सक्छन् जुन उनीहरूले पहिला कहिल्यै गरेका थिएनन्। संस्थाले विद्यार्थी र पूर्व छात्रोंको रोजाईको रोजगारीको लागि नेटवर्कमा नयाँ अवसरहरू छन् भनेर तथ्यलाई सराहना गर्दछ र एक अर्कासँग सामाजिक रूपमा कुराकानी गर्न सक्दछ। संस्था विश्वस्त छ कि यसले बजारमा संस्थाको लामो समयदेखि प्रतिष्ठामा योगदान पुर्‍याउँछ।
)) प्रतिष्ठा दुई-मार्ग सडक हो: विद्यार्थीहरूले BLI, बोचेरो लिंगुआ इन्टरनेसनलको पूर्व छात्र हुनबाट महत्त्वपूर्ण फाइदा लिन्छन्। एकै साथ संस्थाले अन्ततः यसको स्नातकहरूको "गुण" द्वारा "परिभाषित" गर्दछ अर्थात उनीहरूले कहाँ काम सिध्याउँछन्, उनीहरूले कसरी आफ्नो सामर्थ्यलाई टेस्टमा पुर्याइरहेका छन्, र उनीहरूले छनौटको व्यवसायबाट खुसी छन् कि छैनन्। संस्था र यसको विद्यार्थीहरूको अखण्डता र छवि संस्था र यसका सबै सम्बद्ध संगठनहरूको संरक्षण र संरक्षणमा साझा रुचि छ।
)) विद्यार्थीको विशिष्ट उपक्रम: माथिको कुरालाई ध्यानमा राख्दै, विद्यार्थीहरूले निम्न कार्यहरू गर्ने छन्:
a) संस्था वा यसको कुनै पनि सम्बद्ध संस्थाको बारेमा कुनै पनि सार्वजनिक बयान वा बयानहरू दिनबाट रोक्नुहोस्, जुन गलत, अनावश्यक आलोचनात्मक वा अपमानजनक वा अपमानजनक मानिन्छ, वा जसले संस्थाको प्रतिष्ठालाई अनुचित चोट पुर्‍याउन सक्छ। वा यसको कुनै पनि सम्बद्ध;
b) कुनै पनि सार्वजनिक बयान वा कथनहरू, सामाजिक मिडिया मार्फत वा अन्यथा, बेवास्ता, अनावश्यक आलोचनात्मक वा अपमानजनक, वा अपमानजनक मानिनेछ, वा जुन अर्को (र कुनै सीमितता बिना) विद्यमान वा पूर्व विद्यार्थीको प्रतिष्ठामा अनुचित चोट पुर्‍याउन सक्छ, पूर्व छात्र, प्रशिक्षक, वा संस्थाको स्टाफ सदस्य;
c) संस्थालाई तुरुन्त रिपोर्ट गर्नुहोस्, कुनै पनि अनावश्यक आलोचनात्मक, अपमानजनक वा अपमानजनक बयान वा कथन, वा स्टेटमेन्ट / s को प्रकाशन जो संस्था वा यसको कुनै पनि सम्बद्ध संस्थाको प्रतिष्ठालाई अनुचित चोट पुर्‍याउन सक्छ, सामाजिक मिडिया मार्फत वा अन्यथा। त्यस्ता रिपोर्टिंगमा लेखक वा त्यस्ता प्रकाशनका लेखकहरू, र अन्य सबै विवरणहरू रिपोर्ट गर्ने विद्यार्थीलाई ज्ञात हुनेछ;
d) संस्थालाई तुरुन्त रिपोर्ट गर्नुहोस्, कुनै पनि गलत, अनावश्यक आलोचनात्मक वा अपमानजनक, वा अपमानजनक कथन वा बयानको प्रकाशनलाई अनुचित चोट पुर्याउने अर्को (र कुनै सीमितता बिना) अवस्थित वा पूर्व विद्यार्थी, पूर्व छात्र, प्रशिक्षक, वा संस्थाको स्टाफ सदस्यको। वा यसको कुनै पनि सहयोगी। त्यस्ता रिपोर्टिंगमा लेखक वा त्यस्ता प्रकाशनका लेखकहरू, र अन्य सबै विवरणहरू रिपोर्ट गर्ने विद्यार्थीलाई ज्ञात हुनेछ।
e) संस्था वा यससँग सम्बद्ध कुनै पनि अन्य प्रकारमा संस्था वा यसको कुनै पनि सम्बद्ध निकाय, र सीमितता बिना, यसको संकाय, कर्मचारी, विद्यार्थी वा पूर्ववर्ती, कलंकमा ल्याउन मानिने मानिने संस्थानको असमानताबाट टाढा रहनुहोस्;
f) उनीहरूलाई बाँध्ने कुनै पनि अन्य नीतिहरूसँग आफूलाई परिचित गर्नुहोस्, विद्यार्थीहरू, जसमा उनीहरूले प्रतिबन्ध गरेका छन्, सीमितता बिना तर द्वेष-विरोधी / उत्पीडन / उत्पीडन-विरोधी नीति।
)) अनुपालनको लागि अनुशासन: अनुशासन, निष्कासन वा उपयुक्त रूपमा अन्य प्रतिबन्धित सहित, यो नीति को पालना नगर्न परिणाम हुन सक्छ।
बोचेरो लिंगुआ इन्टरनेसनल (BLI) विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक पूर्ण गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्न सबै उचित कदमहरू चाल्न प्रतिबद्ध छ। यस सामान्य रूपरेखा भित्र, सबै विद्यार्थीहरु संग निष्पक्ष र समान व्यवहार गरिन्छ। जो विद्यार्थीहरू आफैं र उनीहरूका सँगी विद्यार्थीहरूको लागि बीएलआईको शैक्षिक र नैतिक लक्ष्यहरूको समर्थन गर्दैनन् तिनीहरूलाई दण्ड र दण्डहीनता समावेशी हुन सक्छ।
सामान्यतया, BLI प्रयास बिना निष्कासन को समाधान गर्न को लागी गर्छ। मौखिक चेतावनी, लिखित चेतावनी र एक निलम्बन यो भन्दा पहिले हुन सक्छ र कार्यहरु को सबैभन्दा गम्भीर।
जब बीएलआई यसको विद्यार्थी, कर्मचारी, ग्राहक वा अन्य आगन्तुकहरूको अखंडता, सुरक्षा वा कल्याण समात्दछ, तब विद्यालयको विवेकमा प्रक्रियाको कुनै पनि बिन्दुमा निष्कासनको अनुमति दिइन्छ।
1) सबै विद्यार्थीहरूले मर्यादित र व्यावसायिक ढ themselves्गले आफैंले सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
2) विद्यार्थीहरूलाई निलम्बन वा खारेज / निष्कासित गर्न सकिन्छ, उनीहरूको गम्भीरता र / वा तिनीहरूको "मिसकन्डक्ट" को डिग्रीमा निर्भर गर्दछ: मिसकन्डक्टलाई परिभाषित गरिएको छ, र सीमा बिना:
क) विद्यालय वा यसका विद्यार्थीहरूलाई कार्यक्रमको प्रशासन सहित (कुनै पनि कार्य वा हिंसाको धम्की दिएर, स्कूलको समावेशीकरण वा आवास नीतिमा सहयोग गर्न असफल भए पनि) वा स्कूलको वा यसको विद्यार्थीहरूको सम्झौता गरी बाधा पुर्‍याउने वा कुनै भौतिक सम्बन्धमा गर्ने आचरण। )
बी) विद्यार्थीको प्रदर्शन स्कूलको व्यावसायिक, शैक्षिक, वा नैतिक मापदण्डमा बदनाम ल्याउँछ
c) शैक्षिक असफलता
घ) कम उपस्थिति अर्थात उपस्थिति जुन कुनै कार्यक्रम स्वीकृति आवश्यकता भन्दा तल आउँछ, वा गरीब सहभागिता (चिकित्सा बहाना बिना कि आवासको कानुनी आवश्यकतालाई जन्म दिन्छ)
)) आचरण जसले अन्य विद्यार्थी र / वा स्कूल, यसको स्टाफ, एजेन्ट, वा कर्मचारीहरूको कानूनी अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दछ
f) यस विद्यार्थी नामांकन सम्झौतामा तोकिएबमोजिम स्कूलको नीतिहरूको बारम्बार उल्ल ;्घन र स्कूल समय-समयमा आवश्यक अनुसार स्कूलले आवश्यक समझेको, वा लागू कानून र / वा नियमहरूको पालना गर्दै;
छ) विद्यार्थीको हस्ताक्षर गरिएको करारमा तोकिए बमोजिम आवश्यक शुल्क तिर्न असफल;
h) प्रदर्शन आवश्यकताहरू वा अन्य नियमहरू र / वा दिशानिर्देशहरूको उल्लंघन रूपमा उनीहरू विद्यार्थीमा लागू हुन सक्छन्; र
i) क्याम्पस भित्र र स्कूलका विद्यार्थीहरूलाई स्कूल द्वारा अनुमोदन नभएको सामग्री वितरण (जस्तै ब्रोशर, तेस्रो पार्टी विज्ञापन, प्रचार सामग्री, राजनैतिक वा धार्मिक सामग्री, आदि)।
3) स्कूलको नीतिहरूको पालना गर्न बारम्बार असफलता, जुन स्कूल समय-समयमा संशोधन हुन सक्छ किनकि लागू स्कूल र लागू कानून र / वा नियमहरूको पालना गर्दा बर्खास्त / फिर्तीको आधार हो। नोट गर्नुहोस् कि केहि स्कूलका नीतिहरूको उल्ल the्घनले contracepation को गम्भिरताको आधारमा कार्यक्रमबाट तुरुन्त बर्खास्त / निष्कासन हुन सक्छ (तल अनुच्छेद see हेर्नुहोस्)।
4) स्कूलले यसको पूर्ण विवेकमा र लागू कानून र / वा नियमहरूसँग अनुरूप हुन सक्दछ, विद्यार्थीको सम्भावित बर्खास्त / निष्कासन भन्दा पहिले एक निलम्बनको बारेमा विचार गर्न सक्छ।
5) केहि प्रकारको गम्भीर दुराचारले विद्यार्थीलाई "शून्य सहिष्णुता" को आधारमा तुरुन्त बर्खास्त / निष्कासनमा पुर्‍याउँछ। यस्तो आचरणले समावेश गर्दछ, तर सीमा बिना
a) BLI को लागूपदार्थ र रक्सी नीति तोड्दै
बी) अर्को विद्यार्थी, कर्मचारी, संकाय सदस्य, वा क्याम्पस मा आगन्तुक प्रति हिंस्रक र / वा धम्की व्यवहार
ग) परीक्षण वा प्रमाण पत्रसँग सम्बन्धित विद्यार्थी द्वारा शैक्षिक बेइमानी, वा स्कूलको अकादमिक अखण्डतामा जाने कुनै बेइमानी जस्तै अनुमोदन गरिएको सहयोग, अभिलेखहरूको परिवर्तन, घूसखोरी, वा कुनै पनि प्रकारको गलत ब्यबहार
6) उत्पीडन वा भेदभाव - BLI, बोचेरो लिंगुआ इन्टरनेशनलले कुनै पनि विद्यार्थी, कर्मचारी, कर्मचारी, वा एजेन्टको उत्पीडन वा भेदभावको समर्थन गर्दैन। विद्यार्थी जो उत्पीडन वा भेदभावमा संलग्न छन् तत्काल निलम्बन पेन्डि investigationको अधीनमा छन्। कुनै पनि लागू Bule, बोचेरो लिंगुआ इन्टरनेसनलका अन्वेषकहरूले कुनै पनि लागू कानून र नियमको विपरीत उत्पीडन वा भेदभावपूर्ण गतिविधिमा संलग्न भएकोको रूपमा लिने कुनै पनि विद्यार्थीलाई तुरुन्त बर्खास्त / निष्कासनको लागि पेश गर्न सकिन्छ। उत्पीडन वा भेदभाव के हो भन्ने निर्धारणमा, बीएलआईले क्युबेक मानवाधिकार र स्वतन्त्रताको सन्दर्भ गर्दछ।
7) विद्यार्थी वा जसले कुनै पनि हिसाबले बेवास्ता गरे आफैलाई वा अरूको सुरक्षालाई खतरामा पार्दछ।
8) सम्पत्ति हानी गर्ने, चोरी गर्ने र दुरुपयोग गर्ने बिद्यार्थीहरूलाई निष्कासन गर्न सकिन्छ र सम्पत्ति बदल्न वा पूर्ण रूपमा मर्मत गर्न पुनःस्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ।
9) आचारसंहिता उल्ल .्घन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई निलम्बन वा निष्कासन गर्न सकिन्छ। जब उल्लlations्घनले व्यक्ति वा सम्पत्तिमा शारीरिक क्षति पुर्‍याउने सम्भावना हुँदैन, बीएलआईले अनुपालन गर्न असफल भएकोमा निलम्बन प्राप्त विद्यार्थीलाई निष्कासन गर्न सक्दछ र त्यसबेला देखि बीएलआईको आचार संहिताको कुनै पनि सर्तको उल्लंघन गरेको छ।
10) शुल्क फिर्ताको रकम यस सम्झौताको प्रावधान र लागू कानून र / वा नियम द्वारा तोकिए बमोजिम संचालित हुनेछ। जहाँसम्म, बीएलआई, बोचेरो लिंगुआ इन्टरनेशनलको कुनै पनि कानुनी आवश्यकता / ट्यूसन फिर्ता वा कुनै विद्यार्थीको ट्यूशनको कुनै अंश फिर्ता गरिएको कुनै पनि विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न (वा निलम्बन गरिएको छ, जहाँ निलम्बन यति लामो छ कि विद्यार्थीले एक महत्त्वपूर्ण रकम गुमाएको छ) समय वा अवसर जुन अन्यथा पाठ्यक्रम अध्ययनमा खर्च गरिएको थियो), BLI, बोचेरो लिंगुआ इन्टरनेसनलको पढाइ फिर्ता वा कुनै विद्यार्थीको पढाइको कुनै पनि अंश फिर्ता गर्न कुनै बाध्यता हुनेछैन।
11) निलम्बन वा खारेज / निष्कासनको स्वीकृति विद्यार्थीको शैक्षिक रेकर्ड र ट्रान्सक्रिप्टमा रेकर्ड गरिनेछ
12) कुनै पनि कारणले गर्दा निष्कासनको बिषयमा आएका विद्यार्थीहरूलाई लिखित रूपमा सूचित गरिनेछ, ईमेल द्वारा, हस्तान्तरण गरिएको चिठी वा रेजिष्टर गरिएको मेल मार्फत। BLI रेजिष्टर्ड मेल द्वारा डिलिवरीको लागि जिम्मेवार हुँदैन यदि विद्यार्थीले मान्य आवासीय ठेगाना प्रदान गरेको छैन। अधिसूचनामा निष्कासन र प्रभावी मिति को आधार को एक विवरण हुन्छ। निष्कासनको तथ्यलाई विवाद गर्ने बहिष्कृत बिद्यार्थीहरूले विद्यार्थीलाई प्रदान गरिएको बीएलआईको उजुरी प्रक्रिया र उजूरीलाई समर्थन गर्न पर्याप्त प्रमाण प्रदान गरेपछि सूचनाको तीन दिन भित्र अपील गर्नुपर्नेछ। जो विद्यार्थी अपील फाइल गर्छन् र असफल छन् तिनीहरूलाई BLI बाट फिर्ता लिने मानिन्छ
13) अपील प्रक्रिया: बर्खास्त / निष्कासनको तथ्यलाई विवाद गर्ने बहिष्कृत बिद्यार्थीहरूले विद्यार्थीलाई सूचना प्राप्त भएको5दिन भित्र स्कूलमा अपील गर्नु पर्छ।
निष्कासन गरिएक बिद्यार्थी निष्कासनको १० दिन भित्र उसको आफ्नै सम्पत्तिमा रहेको कुनै पनि सम्पत्ति फिर्ता गर्न जिम्मेवार हुन्छ र राम्रो स्थितिमा नफर्किएको सम्पत्तिको लागि आर्थिक जिम्मेवार हुनेछ।
14) बीएलआई, यसको पूर्ण विवेकमा, यो निर्धारित गर्न सक्दछ कि एक पुनर्स्थापनात्मक प्रक्रिया उपरोक्त कुनै पनि प्रकारको अनुशासनको सट्टामा यसलाई बेवास्ता गरिएको छ जुन यो लागू गर्न खोज्छ। एक पुनर्स्थापनात्मक प्रक्रिया एक हो जुन समावेशी वा सहकारी प्रक्रिया मार्फत अन्यायपूर्ण व्यवहारले गर्दा हुने वा प्रकट गरिएको क्षतिको मर्मत गर्ने कुरामा जोड दिन्छ।
ड्रग्स, अवैध पदार्थ र मदिरा
· लागूपदार्थ र शराबको उपभोग विद्यालयको सम्पत्तिमा निषेध गरिन्छ।
· स्कूलको सम्पत्तिमा, स्कूल कार्यक्रमहरूमा, गतिविधिहरूमा वा ट्रिपहरू र कोही पनि स्टाफ वा विद्यार्थीहरूले भ्रमण नगराउँदा भांगको उपभोग गर्न मिल्दैन।
· कुनै पनि नाबालिग / नाबालिग विद्यार्थी जोसँग कानूनी (जस्तै मारिजुआना, प्रिस्क्रिप्शन औषधि, इत्यादि) वा बेच्न वा बेच्ने वितरण गर्दछ वा अवैध अवैध लागूपदार्थ, ड्रग प्याराफर्नेलिया, मदिरा वा सुर्ती कुनै पनि समय स्कूलको सम्पत्तिमा वा स्कूलको अधिकार अन्तर्गत, निलम्बन वा निष्कासन सहित सबैभन्दा गम्भीर अनुशासनात्मक कार्यको अधीनमा छ
· ड्रग्स र मदिरा सम्बन्धी स्कूलको नीतिहरू सबै BLI विद्यार्थी यात्रा र गतिविधिहरूमा पनि लागू हुन्छ। विद्यालयले कुनै पनि विद्यार्थीको सामानहरू खोजी गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्दछ यदि विद्यार्थीलाई स्कूलमा ड्रग्स वा अवैध पदार्थ वा आईटमहरू छ भने, यात्रा र गतिविधिहरूमा। विद्यार्थीहरू लागूपदार्थ वा मदिराको प्रभावमा परेका छन् भन्ने निलम्बन वा निष्कासन सहित गम्भीर परिणामहरूको सामना गर्दछ
होमस्टे नियम र दिशानिर्देशन
तपाईं र तपाईंको परिवार बीच राम्रो सम्बन्ध सक्षम गर्न आदर आवश्यक छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले उनीहरूका नियमहरूलाई सम्मान गर्नुभयो।
आधारभूत गृह नियमहरू
· होस्ट परिवारका सदस्यहरूलाई विचार र सहिष्णुता देखाउनुहोस्
· परिवारलाई खबर गर्नुहोस् यदि तपाईं खानाको लागि घर हुनुहुन्न, बेलुकी बेलुकी घर पुग्नुहुनेछ, वा राति बाहिर बस्नुहुनेछ
· घरमा आफैं सफा गर्नुहोस्
· तपाईंको कोठा सफा र व्यवस्थित राख्नुहोस्
· कृपया तपाईंको कोठामा खाना नखानुहोस्
· होस्ट बेडरूम, निजी कोठा, वा बाथरूम यो कब्जा हुँदा प्रवेश नगर्नुहोस्
· होस्ट परिवारका सदस्यहरूबाट पैसा Doण लिने नगर्नुहोस्
· होस्ट परिवारका सदस्यहरूको उपस्थितिमा सँधै उपयुक्त पोशाक र कभर हुनुहोस्
तपाईंको होस्ट परिवारले तपाईंलाई परिवारको सदस्यको रूपमा उनीहरूको घरमा स्वागत गर्नेछन्। यसको मतलव तपाईसँग एक "अतिथि" भन्दा बढी अनौपचारिक रूपमा व्यवहार गरिने छ। परिवारले यसको कदर गर्दछ जब तपाईं आफ्नो कोठालाई सफा राखेर र सामान्य कामहरू जस्तै टेबल सेट गर्ने, भाँडा माझ्ने, वा बेलुकाको खाना तयार गरी सहयोग पुर्‍याएर घरमा मद्दतको प्रस्ताव गर्नुहुन्छ।
एक परिवार को सदस्य को रूप मा, तपाईं आफ्नो नाश्ता र खाजा बनाउन को लागी सोध्न सक्छ, वा आफ्नो लुगा धुनु गर्न को लागी गर्न सकिन्छ किनकि परिवारका प्रायः सदस्यहरूले यही गर्छन्।
याद राख्नुहोस्, तपाईं एक होटेलमा बस्नुहुन्न जहाँ नोकरी सेवाहरू प्रदान गरिएको छ।
यी घरधन्दामा सहयोग पुर्‍याउँदा तपाईलाई परिवारका सदस्यसँग कुरा गर्ने अवसर, तपाईंको अ .्ग्रेजी अभ्यास गर्ने, र परिवारको अंश हुने अवसर पनि दिन सक्छ।
तीन दिनको खाना सामान्य हो। यदि तपाइँको होस्ट परिवार टाढा हुन जान्छ भने तपाइँ खाना तयार गर्न को लागी उपलब्ध हुनेछ। अक्सर क्यानाडाका विद्यार्थीहरूले आफ्नै खाजा तयार पार्दछन् स्कूलमा जानको लागि।
हप्ताका दिनहरू, बिहानको खाजा, छिटो, हल्का खाना हो। परिवारहरूले सँगै बिहानको खाजा तयार पार्न सक्छन्; यस खानामा रोटी / टोस्ट / फल, जुस / दूध, र अनाज / अण्डा समावेश हुन सक्छ।
खाजामा स्यान्डविच, कच्चा तरकारीहरू, कुकीहरू, दूध / जुस, र फलहरू समावेश हुन सक्छन्।
रात्रिभोजमा चावल, मासु, पकाएको तरकारीहरू, सलाद र डेजर्ट समावेश हुन सक्छ।
तपाईंको होस्ट परिवारले तपाईंलाई के मनपर्दछ र के मनपर्दैन भनेर सोध्नेछ ताकि तिनीहरूले तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रयास गर्न सक्दछन्। यदि तपाईंले कुनै खास खाना मनपर्दैन भने तपाईंले नम्रतापूर्वक आफ्नो होस्ट परिवारलाई सूचित गर्नुपर्दछ।
धेरै क्यानेडाली परिवारमा बिरालाहरू र कुकुरहरू जस्तै पाल्तु जनावरहरू छन्। तिनीहरू प्राय: सफा र मैत्री हुन्छन्। तपाईको होस्ट परिवारका लागि घरपालुवा जनावर परिवारको एक सदस्य हुन्, त्यसैले तिनीहरू घरमा स्वतन्त्र छन्। परिवारलाई थाहा दिनुहोस् यदि तपाईं यी घरपालुवा जनावरहरू तपाईंको कोठामा पस्न चाहनुहुन्न भने।
तपाईंलाई घर कुञ्जीहरूको सेट दिइनेछ ताकि तपाईं कुनै पनि समयमा यसमा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया उनीहरूसँग धेरै सावधान रहनुहोस्। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई हराउनु भयो भने, तुरुन्त परिवारलाई जानकारी दिनुहोस्। कुञ्जी बदल्ने लागतको लागि तपाईं जिम्मेवार हुनुहुनेछ।
· डाटाको ठूलो मात्रा डाउनलोड वा अपलोड नगर्नुहोस् music संगीत वा भिडियोहरू डाउनलोड नगर्नुहोस्।
· टेक्नोलोजीको प्रयोगको लागि नैतिक र नैतिक दृष्टिकोण प्रदर्शन गर्नुहोस्।
· लाइट अफ गर्नुहोस् जब तपाईं आफ्नो कोठामा हुनुहुन्न
· नुहाउने / स्नान गर्ने समयको लागि उचित समय खर्च गर्नुहोस्
· घरले जाडोको समयमा रमाइलो तापमान कायम गर्दछ (२० डिग्री लगभग।)
· कोठालाई बढी न्यानो पार्नुहोस्
· पुन: साइकल। घरहरूमा फोहोर फाल्न धेरै ठाउँहरू हुन सक्छन्। प्राय: कागज, क्यान र प्लास्टिक विभिन्न कन्टेनरहरूमा राखिन्छन्। तपाईंको परिवारले तपाईंलाई यो व्याख्या गर्नेछ।
· घरेलु उपकरणहरू वा उपकरणहरू प्रयोग गर्नु अघि होस्ट परिवारसँग परामर्श लिनुहोस् र तिनीहरूलाई परिवारद्वारा स्वीकृत विधिहरूमा प्रयोग गर्नुहोस्।
· यदि तपाई घरको बाथरूममा कुनै क्षति पुर्‍याउनुहुन्छ भने तुरुन्त परिवारलाई फिर्ता प्रदान गर्नुहोस्
· घर भित्र आफ्नो कपाल र not नगर्नुहोस्, रye क्षति हुन्छ र यसले छुने सबै दागहरु।
· महिलाले उनीहरूको प्याडलाई शौचालयमा फ्याँक्नु हुँदैन, तर तिनीहरूलाई टिश्युमा बेर्नु र फ्याँक्नु पर्छ।
· शौचालयमा कागज बाहेक वस्तुहरू फ्याँक्नुहोस्
· कृपया शौचालयमा कागज टोकरीमा फाल्नुहोस्, टोकरीमा होइन
· उचित समयको लागि टेलिफोन प्रयोग गर्नुहोस्, लामो दूरी कल गर्नका लागि अनुमति माग्नुहोस् र यी कलहरू संकलन वा कलिंग कार्ड प्रयोग गरेर गर्दछ। हामी तिनीहरूलाई गतिविधि विभाग मा बेच्ने।
· तपाईले बनाउनु भएको कुनै लामो दूरी कलहरूको लागि भुक्तानको लागि तपाईं १००% जिम्मेवार हुनुहुन्छ
· १० बजे पछि कल वा कलहरू प्राप्त नगर्नुहोस्
यदि तपाई कसैलाई घरमा आमन्त्रित गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले पहिले तपाईको परिवारबाट अनुमति लिनु पर्छ। कुनै पाहुनालाई रातको लागि बस्न अनुमति छैन, जब सम्म तपाईंको होस्ट परिवारले तपाईंलाई यसको लागि प्राधिकरण प्रदान गर्दैन।
तपाईंले आफ्नो निवासको लागि परिवारलाई भुक्तान गर्नु हुँदैन। तपाईंले BLI तिर्नु पर्छ र BLI होमस्टे विभागले परिवारलाई भुक्तान गर्नेछ। प्रत्येक भुक्तानीले weeks हप्ताको आवास र तपाईंले छनौट गर्नुभएको खाना योजना कभर गर्दछ। हालको weeks हप्ताको सत्रको अन्त्य हुनु अघि कम्तिमा २ हप्ता तपाईंको भुक्तानी गर्नुहोस्। अन्यथा, हामी ग्यारेन्टी दिन सक्दैनौं कि तपाईंको कोठा तपाईंको लागि आरक्षित हुनेछ।
होमस्टेमा बस्ने विद्यार्थीहरूको एक हप्ता अनुकूलन अवधि हुन्छ। यदि यस अवधिमा, केहि मान्य कारणका लागि, तपाई बस्ने घरको घरमा सहजै महसुस गर्नुहुन्न भने, तपाईलाई कुनै शुल्क बिना फरक होमस्टेमा सारिन सकिन्छ, तर तपाईले पहिले होमस्टे कोर्डिनेटरसँग समस्या छलफल गर्नुपर्नेछ। कृपया तपाईंको पहिलो हप्ताको अवधिमा यसो गर्नुहोस्, किनकि यदि तपाईं शुक्रवार पछि परिवर्तनको लागि अनुरोध गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले हप्ताहरू परिवर्तनको लागि तिर्नुपर्नेछ।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि तपाईंलाई तत्काल सारिने छैन। स्थिति विश्लेषण गरेपछि, होमस्टे कोअर्डिनेटरले परिवारलाई कुरा गरिरहेको छ कि के तपाईंलाई पिरोल्दै छ के तपाईंलाई समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्न। यदि समस्याको समाधान छैन भने, होमस्टे कोअर्डिनेटरले तपाईंलाई पछ्याउने चरणहरू बताउँदछ।
यदि तपाईं आफ्नो होमस्टे परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने, वा यदि तपाईं बाहिर सर्न चाहानुहुन्छ भने कम्तिमा २ हप्ताको लिखित सूचना तपाईंले BLI लाई बाहिर जानु अघि दिनु पर्छ। होमस्टेको पहिलो weeks हप्ता गैर-फिर्ती योग्य छन्।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम समाप्त गरेपछि, तपाईं आफ्नो होमस्टे छोड्ने आशा गरिन्छ। यदि तपाइँ तपाइँको बसाई बढाउन चाहानुहुन्छ भने, तुरन्त होमस्टे विभागमा सम्पर्क गर्नुहोस् र तपाइँलाई सहि प्रस्थान मितिको बारेमा जानकारी दिनुहोस्।
कृपया ध्‍यान दिनुहोस् कि यदि तपाईं होमस्टे नियमहरूको गम्भीर उल्ल .्घनमा संलग्न हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई होमस्टेबाट निकालिनेछ र तपाईंले तिर्नुभएको शुल्कहरू फिर्ता फिर्ता हुनेछैन।
विरोधी बदमाशी नीति
बदमाशी भनेको के हो?
बदमासी भनेको कुनैलाई हानि गर्ने जानाजानी इरादा हो जससँग यसलाई रोक्ने शक्ति छैन। बदमाशी, उत्पीडन वा भेदभावको कुनै अन्य प्रकार अनैतिक हो र एक व्यक्ति को सुरक्षित महसुस गर्न को अधिकारको साथ हस्तक्षेप गर्दछ।
बदमाशीले धेरै प्रकारहरू लिन सक्दछ। यो कि त हुन सक्छ:
आमने सामने जो सामिल छ, लडाई, धक्का, अपमानजनक, शर्मनाक, डराउने वा व्यक्तिगत ठाउँमा आक्रमण।
पछाडि-पछाडि, जस्तै आपत्तिजनक वा धम्कीपूर्ण सन्देशहरू लेख्ने वा चोट पुर्‍याउने वा पीडादायी सन्देशहरू पठाउने जस्ता।
शारीरिक वा मनोवैज्ञानिक
यौन उत्पीडन, जसमा यौन व्यवहार, अनुपयुक्त चुटकुले वा टिप्पणीहरू र / वा कसैलाई अपमान गर्ने जस्तो अनावश्यक कुनै व्यवहार समावेश छ।
जातीय उत्पीडन, चिढाउने, सामाजिक बहिष्कार वा कसैको दौडको कारण आलोचना समावेश गर्दछ।
मलाई कसरी दाउने?
व्यवहार बदमाशको रूपमा वर्गीकृत गर्न को लागी, दोहोरिएको व्यवहार संलग्न हुनु पर्छ। यी ब्यवहारहरू वा कार्यहरू हानि पैदा गर्न डिजाइन गरिएको हो। मन नपराउने वा लोकप्रिय नहुनु वा साथीहरू नबनाउनु बदमाशीको संकेत होईन र व्यक्तिगत सीपको अभावको संकेत हुन सक्छ। बदमाश जहिले पनि ठूलो वा ठूलो हुँदै हुँदैन। जो कोहीले पनि कसैलाई बदमाश गर्न सक्दछ।
बदमाशीको मुख्य विशेषताहरू यो हो कि यो दोहोरिन्छ, चोट पुर्‍याउँछ र दु: ख निम्त्याउँछ र यसले अनुचित तरिकामा शक्तिको प्रयोग समावेश गर्दछ।
मलाई के दुर्व्यवहार गरिएको छ भने म के गर्ने?
यदि तपाईंलाई बदमाश गरिएको छ भने, यो अत्यावश्यक छ कि तपाईंले जो चार्जमा हुनुहुन्छ कसैसँग कुरा गर्नु हुन्छ। त्यहाँ सँधै कोही हुनुहुन्छ जो तपाईंलाई सहयोग गर्न र गर्न चाहन्छ। केही विद्यार्थी बदमाशी रिपोर्ट गर्न चाहँदैनन् किनभने उनीहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूले बदमाशलाई अझ खराब बनाउने छन् यदि उनीहरूले बदमाश पत्ता लगाए भने। यद्यपि, यहाँ BLI मा, सबै कर्मचारीहरूलाई तरिकाहरूबाट सिकार हुनेहरूलाई मद्दत गर्ने र सुरक्षा दिने तरीकाले तालिम दिइएको छ।
म कसलाई भन्न सक्छु?
त्यहाँ धेरै कर्मचारीहरू छन् जुन तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं असहज वा असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ भने:
-स्कूल निर्देशक, स्कूल प्रबन्धक
रिसेप्शनिस्टहरू, शिक्षकहरू, शैक्षिक संयोजकहरू
RITE कुरा गर्नुहोस्
पहिचान गर्नुहोस् कि तपाईंसँग सधैं सुरक्षित महसुस गर्ने अधिकार छ। बुलीहरूलाई उनीहरूलाई रोक्न सूचित गर्नुहोस्। जिम्मेवार स्टाफ सदस्यलाई बताउनुहोस्। अवस्थाको मूल्याval्कन गर्नुहोस् र यदि यो राम्रो हुँदैछ भने, थप मद्दतको लागि खोजी गर्नुहोस्।
कार्यक्रम पूरा भयो
यदि तपाईंले सफलतापूर्वक BLI मा आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम पूरा गर्नुभयो हामी तपाईंलाई उपलब्धिको प्रमाणपत्र दिनेछौं जुन तपाईंले लिनु भएको कार्यक्रम, र तपाईंले अध्ययन गरेको पाठलाई दर्साउँछ। यो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि नबिर्सनुहोस् तपाईले सबै स्तरहरू कम्तिमा 70० को औसत औसत ग्रेडको साथ पार गर्नुपर्नेछ र कम्तिमा classes०% कक्षामा उपस्थित हुनुभयो।
प्रत्येक सत्रको अन्त्यमा तपाइँका शिक्षकहरू मध्ये प्रत्येकले तपाइँलाई उनीहरूको कक्षाको लागि अन्तिम ग्रेड दिनेछ। प्रत्येक सत्रको अन्तिम दिनमा, र जब तपाइँ बीएलआई मा आफ्नो अध्ययन पूरा गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको व्याकरण शिक्षक बाट एक व्यक्तिगत अनुरूप प्रगति रिपोर्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि तपाईंलाई तपाईंको सबै कक्षाको एक मुद्रित समेकित रिपोर्ट आवश्यक छ भने, कृपया it 48 घण्टा पहिले नै शैक्षिक विभागबाट अनुरोध गर्नुहोस्।
अनुरोध पछि, हामी अध्ययनको पत्र प्रदान गर्न सक्दछौं जुन तपाईंले BLI मा अध्ययन गर्नुभयो। यो पत्रले तपाईले हरेक हप्ता अध्ययन गरेको पाठको कुल संख्या, तपाईको अध्ययनको लम्बाई, परिणाम र उपस्थितिलाई जनाउँछ। कृपया 48 XNUMX घण्टा पहिले नै शैक्षिक विभागमा अनुरोध गर्नुहोस्।
विद्यार्थीहरूले पाठ्यक्रमको सुरुवात स्थगित गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई पहिले नै BLI सूचित गर्नु पर्छ। त्यसपछि नयाँ एक्स पत्र6महिना भित्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि नि: शुल्क मितिको लागि जारी गरिनेछ।6महिना भन्दा बढी पढाई गर्ने विद्यार्थीहरूले 100 CAD चार्ज गरिनेछ।
रद्दीकरणका सबै नोटहरू मेल, फ्याक्स, वा इ-मेलले लेखेको पत्रमा दिइन्छ जुन तपाइँले दर्ता गर्नुभएको कार्यक्रमबाट हटाउन चाहानुहुन्छ। दर्ता र आवास प्लेसमेंट फीस गैर रिफन्ड योग्य छैनन्।
यदि एक विद्यार्थी भिसा अस्वीकारको कारणले उनको कार्यक्रम रद्द गर्न बाध्य छ भने, एक पूर्ण फिर्ती दर्ता शुल्क र आवास स्थान शुल्क को छोडेर को प्रतिफल गरिनेछ। नोट गर्नुहोस् कि ब्ल्याइलाई क्यानाडाको मूल पत्र इन्कार गर्नु आवश्यक छ।
विद्यार्थीहरू प्रतिपूर्तिको लागि योग्य हुन निम्न दिशानिर्देशहरू भित्र पस्नुपर्छ:
कार्यक्रम सुरु मिति भन्दा अघि
a) १० दिन भन्दा कम तपाईको दर्ता पेस गरे पछि · १००% शिक्षण शुल्क।
बी) starts१ दिन वा सो भन्दा पहिले कार्यक्रम सुरु हुने · %०% शिक्षण शुल्क।
ग) यदि विद्यार्थी कार्यक्रम सुरू मिति भन्दा days० दिन भन्दा पहिले रद्द गर्दछ भने · %०% शिक्षण शुल्क।
कार्यक्रम सुरु मिति पछि
क) कार्यक्रमको १-१०% बीचमा - शिक्षण शुल्कको ·०%।
बी) कार्यक्रम को ११ - २ween% बीच · शिक्षण शुल्कको %०%।
c) २%% वा अधिक कार्यक्रमको · ०% शिक्षण शुल्क।
विद्यार्थीहरूले स्तरवृद्धि गर्न सक्छन् तर उनीहरूको कार्यक्रमलाई डाउनग्रेड गर्न सक्दैनन्। उदाहरणका लागि यदि विद्यार्थी पूर्णकालिक प्रोग्रामबाट अंशकालिक कार्यक्रममा परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने, उसले कार्यक्रमलाई रद्द गर्न र पुन: लागू गर्नुपर्नेछ। रद्दीकरण नीति लागू हुनेछ।
* यदि एक छात्र बीआईएल अध्ययन अनुमतिको साथ क्यानाडा आउँछ भने, उनले वा उनी सबै फिर्तीहरूको अधिकार फर्काउँछ।
Homestay प्लेसमेंट शुल्क गैर-फिर्ती योग्य छ। विद्यार्थीले2हप्ताको नोट लिखित रूपमा होमस्टे समकक्षरेटरमा दिनुपर्दछ यदि तिनीहरू आफ्नो गृहस्थ परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने। हप्ताको पहिलो4हप्ता गैर-फिर्ती योग्य छन्।
फिर्ता रकम प्रशोधन गर्ने समय
यदि त्यो माथिको शर्तहरू अन्तर्गत फिर्ता रकमको लागि योग्य छ भने, तपाईंलाई रद्दीकरणको लिखित सूचनाको प्राप्ति पछि 45- कार्य दिनको अवधि भित्र प्रतिपूर्ति गरिनेछ।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि दर्ता शुल्क र आवास प्लेसमेन्ट शुल्क कुनै पनि परिस्थितिमा फिर्ता गर्न योग्य छैन।
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि फिर्ता रकम भुक्तानी गर्ने व्यक्तिलाई मात्र दिइनेछ। यदि तपाईंले एजेन्सी मार्फत आफ्नो भुक्तानी गर्नुभयो भने, एजेन्सीले तपाईंलाई फिर्ताको लागि अनुरोध गर्नुपर्छ।
जसरी भुक्तानी प्राप्त भएको थियो त्यसै गरी फिर्ता गरिनेछ। यदि भुक्तानी नगद वा चेक मार्फत गरिएको थियो भने, फिर्ता गरिने रकम तपाईंको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईंले क्रेडिट कार्डद्वारा भुक्तानी गर्नुभयो भने, फिर्ता तपाईंले भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्नुभएको क्रेडिट कार्डमा नै गरिनेछ।
1) स्कूल ("हामी" भनेर पनि चिनिन्छ, वा "हामी यस नीति अन्तर्गत") यो नीति गोपनीयता र हाम्रो व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षा प्रति हाम्रो प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्न को लागी बनाएको हो, वर्तमान गोपनीयता कानून बमोजिम जानकारी। तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी कसरी व्यवहार गरिनेछ बुझ्न को लागी यो नीति पढ्नुहोस्।
2) स्कूलले धेरै तरीकाले जानकारी सlects्कलन गर्दछ। केहि व्यक्तिगत जानकारी भेला गरिएको छ यदि तपाईं हामीसँग दर्ता गर्नुभयो। रेजिष्ट्रेसनको बखत, स्कूलले तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी जस्तै तपाईंको नाम, ईमेल ठेगाना, लि gender्ग, zip / हुलाकी कोड, व्यवसाय, उद्योग र व्यक्तिगत रुचिहरू सोध्न सक्छ।
3) हामी तपाईलाई व्यक्तिगत जानकारी रेजिष्ट्रेसनको सन्दर्भ बाहिर सोध्न सक्छौं, समावेश सहित (तर सीमित छैन) जब तपाईं स्कूलबाट फाइल डाउनलोड गर्नुहुन्छ (जस्तै .PDF फाईल); जब तपाईं हामीलाई सम्पर्क गर्न सोध्नुहोस्; जब तपाईं हाम्रो मेलिंग सूचीमा सामेल हुनुहुन्छ; र जब तपाइँले हामीलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू वा प्रस्ताव गरिएको पाठ्यक्रमहरू सम्बन्धित समस्या रिपोर्ट गर्नुहुन्छ। यदि तपाईंले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी त्यो पत्राचारको रेकर्ड राख्न सक्छौं।
4) जब सम्भावित विद्यार्थीहरू, अर्थात् उम्मेद्वारहरूले हामीलाई उनीहरूको नाम, पत्राचार ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, र इ-मेल ठेगाना जस्ता जानकारी प्रदान गर्दछन्, हामी यो सम्पर्क जानकारीलाई यी उम्मेदवारहरूलाई स्कूल र BLI, Boochereau Lingua International को बारेमा थप जानकारी पठाउन प्रयोग गर्दछौं। उम्मेदवारको सम्पर्क जानकारी पनि हामी उनलाई वा उनीसँग सिधै सम्पर्क गर्न प्रयोग गर्न सक्छौं। उम्मेदवारहरूले कुनै पनि समयमा शैक्षिक संयोजकलाई सूचित गरेर भविष्यबाट मेलि orहरू वा अन्य सञ्चारहरू प्राप्त नगर्न छनौट गर्न सक्दछन्।
5) हामी कुनै पनि परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको पासपोर्ट, अध्ययन अनुमति, वा समान कागजात रोक्ने वा रोक्ने छैनौं।
)) हामी तपाईंको लिखित सूचित सहमति प्राप्त बिना तेस्रो पक्षलाई तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी बेच्ने वा भाँडामा लिदैनौं। सामान्यतया, स्कूल कुनै पनि घटना मा व्यक्तिगत जानकारी बेच्ने वा भाँडामा दिँदैन।
7) स्कूलको वेबसाइटले धेरै शीर्षकहरूमा धेरै जानकारीहरू प्रदान गर्दछ। जब स्कूलले यसको साइट प्रयोगकर्ताहरूलाई सही जानकारी प्रदान गर्न कोसिस गर्दछ, यसले यस सामग्रीको शुद्धता वा विश्वसनीयताको बारेमा कुनै ग्यारेन्टी प्रदान गर्दैन। स्कूलको वेबसाइट र / वा स्कूल सम्बन्धित ईन्टरनेटमा कुनै सामग्री, एक अनुबन्ध वा स्कूल बाट यसको साइट प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रतिज्ञा गर्दैन, तिनीहरू सम्भावित विद्यार्थीहरू, विद्यार्थीहरू, वा अन्यथा।
8) स्कूलको वेबसाइटमा सुरक्षा उपायहरू र सुरक्षा कोषहरू छन् जहाँबाट कुनै पनि समयमा हाम्रो नियन्त्रणमा रहेको सूचनाको नोक्सान, दुरुपयोग, र परिवर्तनको बिरूद्ध सुरक्षा हुन्छ। जहाँसम्म, ईन्टरनेटमा कुनै डाटा प्रसारण पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैन हामी तपाईले हामीलाई पठाउँदा वा हाम्रो अनलाइन उत्पादनहरू वा सेवाहरूको सम्बन्धमा कुनै पनि जानकारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न वा वारेन्टी दिन सक्दैनौं, र तपाई आफ्नै जोखिममा त्यसो गर्नुहुन्छ। एकचोटि हामीले तपाईंको ट्रान्समिशन प्राप्त गर्यौं, हामी हाम्रै साथ सुरक्षित राखिएको सुनिश्चित गर्न हर प्रयास गर्छौं। तपाईं अझै पनी आफ्नो पासवर्डहरू र / वा कुनै खाता जानकारी को गोपनीयता कायम गर्न को लागी पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्दछ।
9) हामी भण्डार गर्न सक्छौं र कहिलेकाँही तपाईंको बारेमा जानकारी ट्र्याक गर्न सक्छौं। हामी हाम्रो वेबसाइट वा अनलाइन फारमहरूलाई स्वचालित रूपमा गर्न सक्दछौं, वा हाम्रो कार्यक्रमहरूमा रुचि राख्ने कोहीलाई बुझ्न मद्दतको लागि।
10) कुनै पनि कानून मा छनौट को अधीन छ जो हामीलाई तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी को आवश्यकता को रूप मा प्रकट गर्न को लागी अनुमति दिनेछ, हामी तपाईंको सूचित जानकारी को लागी बाहेक हामी तपाईंको कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी खुलासा गर्ने छैनौं। "व्यक्तिगत जानकारी" कानूनको संचालनबाट परिभाषित छ कुनै पहिचान योग्य व्यक्तिको बारेमा कुनै सूचनाको नाम, शीर्षक, र व्यवसाय ठेगाना वा संस्थाको एक कर्मचारीको कार्यालय टेलिफोन नम्बर बाहेक।
11) हालको कानून बमोजिम अनुमतियोग्य छुटका लागि हामी व्यक्तिगत जानकारी खुलासा गर्न सक्दछौं जब हामीसँग यो जानकारीको खुलासा गर्दा स्कूलको नीति उल्लting्घन गर्ने, कानूनको उल्लंघन गर्ने, कसैको बिरूद्ध कानुनी कारबाही गर्न आवश्यक छ भन्ने विश्वास गर्ने कारण छ। ओंटारियो वा क्यानडा, वा स्कूलमा अधिकार वा सम्पत्ति, अन्य विद्यार्थी वा संकाय सदस्यहरू, वा त्यस्तो गतिविधिहरू द्वारा क्षति पुर्‍याउन सक्ने जो कोहीसँग चोटपटक वा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ (वा जानाजानी वा अन्जानमा)। हामी तपाइँको informationण चुक्ताको fulणको वैध संकलनको उद्देश्यको लागि हामीले संकलन एजेन्सीलाई तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी खुलासा गर्न सक्दछौं।
12) प्रयोग, संग्रह, अवधारणा, र सबै विद्यार्थी अभिलेखहरूको खुलासाको सम्बन्धमा हाम्रो नीति लागू गोपनीयता कानूनका साथसाथै अन्य लागू ऐन तथा नियमहरूको प्रावधानमा पनि शासित छ।
13) हामी आवधिक रूपमा हाम्रो गोपनीयता नीति अद्यावधिक गर्न हरेक प्रयास गर्छौं जुन यो गोपनियता कानून कानून, र त्यहाँ लागू कुनै नियमहरु को पालनामा छ।
14) स्कूल भिडियो निगरानी नीति सम्बन्धी कुनै कानूनको पालना गर्दछ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यसले भिडियो निगरानी प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गर्ने हदसम्म, स्कूल गर्दछ
(क) निगरानीको लागि एक उचित व्यापार उद्देश्य त्यहाँ छ सुनिश्चित गर्नुहोस्;
(ख) केहि विशिष्ट, वैध उद्देश्यको लागि लक्षित नभएको व्यक्तिको छविहरू क्याप्चर नगर्न प्रयास गर्नुहोस्;
(ग) हदसम्म सम्भव भएसम्म, क्यामेरा प्रयोग नगर्ने क्षेत्रमा मानिसहरू कडा गोपनीयता अपेक्षा राखेका छन्;
(d) सम्भव भएसम्म, विद्यार्थी र क्यामेराको प्रयोगको बारेमा अन्य व्यक्तिहरूलाई परिसरमा प्रवेश गर्नु अघि सूचित गर्न खोज्नुहोस्;
(e) रोक्न को लागी केहि कानूनी औचित्यको अधीनमा र डाटा नष्ट नहुँदासम्म, व्यक्तिको पहुँच प्रदान गर्नुहोस् जसका छविहरू भिडियो टेपमा क्याप्चर गरिएका छन्;
(f) डाटा क्याप्चरको दिनदेखि १ days दिन भित्र नष्ट भयो
(छ) सुनिश्चित गर्नुहोस् कि भिडियो निगरानी उपकरण र भिडियो टेपहरू सुरक्षित छन् र अधिकृत उद्देश्यहरूको लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ;
(h) सुनिश्चित गर्नुहोस् कि रेकर्ड गरिएका छविहरू भण्डार गरिएको छ, ती सीमित पहुँचको साथ सुरक्षित स्थानमा भण्डार गरिएको छ;
(i) रेकर्ड गरिएका छविहरू IT विभाग द्वारा प्रबन्धित गरिन्छ।
15) विद्यार्थीले संस्थान छोड्छ र कुनै पनि मिडियामा र कुनै उद्देश्यका लागि सबै छविहरू र ध्वनि रेकर्डि license लाईसेन्स गर्न र प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गर्दछ। विद्यार्थी सहमत छ कि संस्थानको स्थायीताको लागि छवि र ध्वनि रेकर्डि toमा सबै अधिकारहरू छन्। यो सम्झौता अपरिवर्तनीय, विश्वव्यापी र स्थायी हो।
16) यदि तपाईंसँग हाम्रो गोपनीयता र भिडियो निगरानी नीति वा यस सम्बन्धमा हाम्रो अभ्यासहरू बारे कुनै प्रश्न वा चिन्ता छ भने, कृपया स्कूल प्रबन्धकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।